अनुष्का,माधुरी, ऐश्वर्या रायदेखि शिल्पा सेट्टीसम्मले लगाउने मंगलसुत्रको मूल्य कति ? – OSNepal
एजेन्सी । तपाई विबाहित महिला हो र तपाईले मंगलशुत्र लगाउनुभएको छ भने त्यसको मूल्य कति पर्छ होला ? त्यो ब्यक्ति र पत्रपिच्छे फरक होला । तर हिजोआज विवाहित महिलाको लागि मंगलशुत्र फेशन बनेको छ । यो फेशनले बलिउड सेलिब्रेटीलाई त झन् निकै छोएको छ ।
बलिउड सुन्द्यरी नायिका अनुष्का शर्मा बलिउडमा सबैभन्दा महंगो मंलगशुत्र लगाउने नायिकामा पछिन् । अनुष्काको मंगलशुत्रको मूल्य ५२ लाख रुस्पैयाँ बराबरको रहेको छ । अझ अनुष्काको भन्दा बढी मूल्यको मंगलशुत्र नायिका दिपिका पादुकोणले लगाउँछिन् । दीपिकाले ७५ लाख रुपैयाँको मंगलशुत्र लगाइरहेकी छिन् ।
त्यस्तै माधुरी दिक्षितको विवाहको मंगलशुत्र निकै सुन्दर छ । उनको मंगलशुत्रको मूल्य ८ लाख रहेको छ भने ऐश्वर्या रायको सुन्दर मंगलशुत्रको मूल्य २५ लाख रहेको छ । अर्की सुन्दरी नायिका शिल्पा सेट्टीको मंगलशुत्रको मूल्य १० लाख रहेको छ । त्यस्तै नायिका करिश्मा कपूरले १० लाखको मंगलशुत्र लगाउँदै आएकी छिन् ।काजलको सुन्दर मंगलशुत्रको मूल्य १५ लाख हो ।